ဇနီးသည်နှင့် ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ ဥပဒေတစ်ချို့ (ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ စစ်သာနီ၏ ဖသ်ဝါ အရ )
မတျ ၁၆, ၂၀၁၅ - ၅:၀၉ ညနေ
News Code : 677203
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ စစ်သာနီ၏ ဖသ်ဝါ အရ ဇနီးသည်နှင့် ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ ဥပဒေတစ်ချို့ ကို အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာ မှတ်သားနိုင်ပါတယ် ။
၁။ မေး - အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်၏ ဘဝ အတွက် မည်သည့် အရာများ အရေးကြီးပါသနည်း ?
ဖြေ - အပြန်အလှန် (ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီး) ရှရီအီတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ဖို့ ဂရုပြုရပါမည်၊အပြည်အလှန် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ အမှားများကိုခွင့်လွတ်(နားလည်)ပေးရပါမည်၊အိမ်ထောင်သည်ဘဝ၏အဓိက အချက်အချာ အကျဆုံးမှာ အချစ်မေတ္တာ ဖြစ်သဖြင့် အချစ်မေတ္တာ ကို (အပြန်အလှန်ပေးနိုင်ဖို့) ကြိုးပမ်းရပါမည်။
၂။မေး - ဇနီးသည် အနေဖြင့်မိမိ၏ ခင်ပွန်းသည်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိ ဘဲ စာသင်ကြားခွင့်ရှိပါသလား ?
ဖြေ - စာသင်ကြားဖို့အတွက် ခင်ပွန်းသည် ၏ ခွင့်ပြုချင်ယူဖို့ အရေးမကြီးပေ။ သို့သော် အိမ်အပြင်သို့ထွက်ရန် အတွက် ခင်ပွန်းသည်၏ကျေနပ်ချက်ခွင့်ပြုမှုယူရန် အရေးကြီးပါတယ်။ မှန်ပါတယ် ။အိမ်မှာနေပြီးတော့လည်း စာသင် ကြား နိုင်ပါတယ်။
၃။ မေး - ဇနီးသည် အနေဖြင့် ခင်ပွန်းသည်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ(မယူဘဲ) မိမိအိမ်(ဟောင်း) မိမိ၏မိဘ နှစ်ပါးနှင့် တွေ့ရန် ထွက်ခွင့် ရှိပါသလား ?
ဖြေ - မရှိပါ။သို့သော် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်သည့် စေလာယေရဟ်မ် (အဖေအမေစသည့်ဆွေမျိုးသားချင်းအရင်း အချာ … တို့၏ အခြေအနေကို စိစစ်ခြင်း ၊ အဆက်အသွယ်မဖြတ်ခြင်း၊ လိုအပ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစသည်တို့ … ကို ခေါ်ပါတယ်။) ပြုရန် အတိုင်း အတာ အထိဆို ရပါတယ်။
၄။ မေး - ဇနီးသည် အနေဖြင့် ခင်ပွန်းသည်၏အမိန့် ကိုနာခံရန် မည်သည့်နေရာတွေမှာ ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပါ သနည်း ?
ဖြေ - ခင်ပွန်းသည် သံဝါပြုလိုခြင်းကို (ရှရီအီခွင့်ပြုသည့် အကြောင်းပြချက်မှအပ) မတားရချေ။ ၎င်း၏ခွင့်ပြု ချက်မရှိဘဲ အိမ်ပြင်မထွက်ရချေ။ (ဆိုလိုချက်မှာ သံဝါပြုချိန်နှင့် အိမ်အပြင်ထွက်ချိန်တွင် ခင်ပွန်းသည်၏ အမိန့်ကို နာခံရန် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်ပေသည်။)
၅။မေး - ဇနီးသည် အနေဖြင့် အိမ်အလုပ်များ လုပ်ဆောင်ပေးမှုအတွက် လုပ်အားခ အနေဖြင့် ယူခွင့်ရှိ ပါသလား?
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့ ၊ ယူပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
၆။ မေး - ဇနီးသည် အနေဖြင့် ဝန်ထမ်း(အစိုးရဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ) လုပ်ရန် ခင်ပွန်းသည်၏ ခွင့်ပြု ချက်ယူရန် အရေးကြီး၊မရေးဆို တာ သိပါရစေ ?
ဖြေ - အိမ်ထောင်မပြုမီလက်မထပ်မီ ဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့ခင်ပွန်းသည်ထံမှ သဘောတူညီချက်ရယူထားလျှင် ခင်ပွန်းသည်အနေဖြင့် တားမြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိချေ။ ဟုတ်ကဲ့ သို့သော် အိမ်အပြင်ထွက်ဖို့ ခင်ပွန်းသည်၏ ခွင့်ပြုချက် ရှိဖို့ ယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။အကယ်၍ ဝန်ထမ်းအလုပ် ကိစ္စ ကို အိမ်မှာနေပြီးဆောက်ရွယ်မည်၊သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသည် အပေါ် ထားရှိ ရမည့် (ရှာရီအီ) ဝတ်တရားတွေကို လိုက်နာနေမည်ဆိုလျှင် ဇနီးသည် ကို အလုပ်လုပ်ခွင့်မှ တားမြစ် ပိုင်ခွင့်မရှိ ချေ။
၇။မေး - ဇနီးသည် ဟာ ဟေဂျာဗ် ဝတ်သူတစ်ဦးပါ။ဟေဂျာဗ်ကို သေသေချာချာဝတ်ဖို့ သတိပြု သူဖြစ် ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ သတိမရှိ၍ ဖြစ်စေ ၊ အဲဟ်သေယာသ်မရှိသည့် အတွက် ဖြစ်စေ ဇနီးသည်၏ ဆံပင်ကို တွေ့ရပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည် အနေဖြင့် ဇနီးသည်ကို ထောက်ခွင့်ရှိပါသလား? အကယ်၍ ဤကိစ္စ ဟာ ဇနီး၏ အခွင့်အရေးဆိုလျှင် ခဏခဏ ဆံပင်ထွက်နေမှုအပေါ် ဒေါသထွက်ခွင့် ရှိပါသလား ?
ဖြေ - နားလည်အောင်ရှင်းပြရပါမည်။ဤကိစ္စ အတွက် ဒေါသ ထွက်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
၈။မေး - ခင်ပွန်းသည် တိုင်းအတွက် ဇနီးအပေါ် ထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်များရှိပါတယ်။၎င်းတာဝန်တွေ ကို ထမ်းဆောင် ရန် အရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ ခင်ပွန်းသည်တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဤတာဝန်တွေ မထမ်း ဆောင်ခဲ့ ဘူးဆိုလျှင် ဇနီးသည် အနေဖြင့် ခင်ပွန်းသည်ကို သံဝါပြုခြင်းမှ တားမြစ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား ?
ဖြေ - ဇနီးသည် အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ တားမြစ် ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။သို့သော် ခင်ပွန်းသည်ကို နားလည်အောင် ရှင်းပြတာလည်း မည်သည့် ထိရောက်မှု မှ မရှိတာကိုတွေ့ရ လျှင် ဟာကင်မ်ရှဲရ် အား တိုင်ကြားပြီး မိမိ၏(ရှရီအီ) တာဝန် ဘာလဲဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ဖို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီစစ်သာနီ ဆိုက်ဒ်(အူရ်ဒူဘာသာ)